Stazzo Li Casacci - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTore
Indlu ibekwe embindini ngokunxulumene nolona lwandle luhle kakhulu: iSanta Teresa, iPalau okanye iPorto Pollo yimizuzu embalwa ukusuka, kunye neelwandle zeCosta Smeralda okanye iMonti Russu, zikufuphi.
Ikwakwindawo efanelekileyo yokuhamba, ukukhwela ibhayisekile kunye nemidlalo yasemanzini.
Kwiimitha ezingama-700 uqukuqela umlambo iLiscia, eneempawu ezilungele ukuhamba ngephenyane.
Ngaphakathi kwipropathi, kwindlela ekhokelela kwiDolmen ye-III Millennium B.C., unokuthatha uhambo olude untywiliselwe kwindalo.
Indawo ifanelekile kubahambi abafuna ukutyelela ezona ndawo zokuchithela iiholide ezidumileyo ezifana nePorto Cervo kunye namanzi ayo acwebezelayo anokufikelelwa ngemizuzu embalwa, kunye nakwabo bathanda indawo yokwenyani, yendalo, bandwendwela iGallura yokwenyani namagxamesi ayo; ngaphezu koko, unokuchitha ixesha elithile elilolunye ukuya elwandle, uhamba ngendlela engqongwe yindalo, apho unokubona ubungqina obunomdla bobudala bobomi basemaphandleni kunye nesakhiwo se-megalithic se-Dolmen, iminyaka eyi-5000 (III-IV yeminyaka eyi-millennium). AC), yomelele ngokupheleleyo. Iseti yamatye egranite ahamba nawo-ayesetyenziswa ngabemi bamandulo njengendawo engcwele-zoba imbonakalo yendalo enomtsalane ngaphandle kokulingana. Kwimizuzu nje emi-5 kude kukho iindawo zakudala zaseLi Lolghi, eLi Muri naseLi Mizzani
4.82 · Izimvo eziyi-28
Le ndlu ibekwe ngaphakathi kwisakhiwo esidala esihlaziyiweyo se-1850, kunye nepropati ejikeleze i-Stazzo yenza ukuba uhambe kakuhle phakathi kwevumba le-brush yeMeditera; Umlambo iLiscia uhamba ecaleni kwepropathi, amanzi ekristale aseCosta Smeralda akufuphi.
Umbuki zindwendwe ngu- Tore
i like nature, biking, photography and chess( just a little bit)
Ndikhona okanye ndifowunelwa yonke imihla
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Arzachena